Dowladda Kenya oo Afrika ka dalbatay in la xoojyo howgalka AMISOM si loo afjaro ururka Al-shabaab. – Radio Daljir
Agoosto 5, 2013 4:38 b 0
Kampala, Aug 5, 2013 – Madaxweynaha dalka Kenya Uhurro Kenyatta ayaa saxaafada la hadlay kadib shirkii dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda, isagoo mar kale ka hadlay Ajandaha Kenya ee AMISOM.
Mr. Uhurru Kenyatta wuxuu shaaciyey in Kenya ay diyaar u tahay horumarin buuxda oo ay ku samaynayso ciidankeeda jooga Soomaaliya, wuxuuna ka dalbaday dalalka Afrika in la taageero dalka Soomaaliya.
Madaxweynuhu Uhurro oo hadlay kadib shirkii Kampala ayaa yiri “Muhiimadeena koowaad ilaa sedeexaad waxay tahay inaan xididada ka siibno Alshabaab, si amaan buuxa looga dareemo qaranka Somalia,”
Wuxuu intaas ku daray madaxweynaha Kenya in dalalkii shiray uu u sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada jooga wakhtigan Soomaaliya ee AMISOM, iyo weliba howgallada oo u baahan in la kordhiyo.
Madaxweynuhu wuxuu ka dalbaday dalalka Afrika ee aysan wakhtigan ciidamadu ka joogin Soomaaliya in ay iyaguna keenaan ciidankooda si loo xoojiyo awooda Soomaaliya, Hay?adaha caalamiga ah iyo ururrada aduunka ayuu ka dalbaday taageero la siiyo howgalka AMISOM.
Al-shabaaab iyo meleteriga dowladda Soomaaliya oo xalay ku dagaalamay duleedka Baydhabo.